Al-Shabaab oo xalay lagu laayey ilaa seddax degmo oo ka kala tirsan gobolada dhaca koonfurta dalka – Hornafrik Media Network
Wararka imaanaya gobolada Jubbooyinka iyo Shabellada Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaal ay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobaladaasi, kadibna uu xigay dagaal toos ah.
Duqeymaha ayaa la sheegay in ay kala dhaceen magaalooyinka Jilib, Bu’aale, Jamaame iyo Kuuya Barow oo ka kala tirsan Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Shabeellada Hoose.
Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in degmada Jilib lagu duqeeyey xarun Al-Shabaab ay hubka ku keydiyaan, waxaana la sheegay in saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab halkaasi lagu dilay, halka duqeyn kale ay ka dhacday degmada Bu’aale.
Sidoo kale degmada Jamaame ayaa la soo warnayaa in duqeyn kale ay ka dhacay xalay, isla markaana lagu dilay xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay in ku tababaranayeen xarun ku taala degmadaas.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa noo sheegay in duqeynta seddaxaad ay ka dhacay deegaanka Kunya-barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, waxaana halkaasi lagu diley sarkaal sare oo ka tirsan hoggaanka caafimaadka Al-Shabaab.
Duqeymahaas ayaa waxaa la aaminsanyahay inay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka oo iyagu mudooyinkii danbe kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan deegaanada ka tirsan gobalada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose.